Chelsea - Experience Best News from Nepal
अमेरिकन फुटबल खेलाडी क्रिस्टियन पुलिसिक इंग्लिस प्रिमियर क्लब चेल्सीमा अनुबन्धित भएका छन् । चेल्सीले ५ वर्ष ६ महिनाका लागि पुलिसिकलाई आफ्नो क्लबमा भित्र्याएको हो । २० वर्षीय पुलिसिक जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डमा आवद्ध थिए । चेल्सीले उनलाई ५८ मिलियन पाउण्ड...
सिरी ए युभेन्ट्स क्लबका प्रशिक्षक मासिमिलियानो एलेग्रीले क्लब छोड्दै छन् संगै नया अफबाहहरु सामाजिक संजाल र अनलाइनमा चल्न सुरु भएको छ । केहि समय यता अफबाह होस् या सचाई एन्टोनियो कोन्टेले युभेन्ट्सलाई समाल्ने कुरा चलेको थियो भने हाल कान्टे उक्त...
चेल्सीका स्टार मिडफिल्डर इडेन हाजार्डले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिइसकेको बताएका छन् । अर्को सिजन चेल्सीसँगको सम्झौता सकिने र रियल म्याड्रिडले पनि इच्छा देखाएको अवस्थामा उनले नयाँ सम्झौता गरेका छैनन् । सिजनको अन्तिम खेलमा लेस्टर सिटीसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि हाजार्डले भविष्यबारे...
केपाले रोके २ पेनाल्टी !! संसनिपूर्ण जितसंगै चेल्सी र आर्सनल यूरोपा लिगको फाइनलमा
यूरोपा लिग जारी यूरोपा लिग सेमी फाइनल अन्तर्गत आज दुई ठुला भिडन्त भएका थिए । फाइनलको यात्राका निम्ति आज चेल्सीले फ्रान्कफर्ट र आर्सनलले भ्यालेन्सियाको सामना गरेको थियो । चेल्सी र फ्रान्कफर्टको खेल चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफर्ड व्रिजमा भएको थियो भने...
के हाजार्ड मड्रिड जादै छन् ? हाजार्ड चेल्सी छोड्ने बस्ने अफवाह र सत्यता
प्रिमिएर लिग सकिदै छ भने चेल्सी स्टार एडेन हाजार्डको स्पेन क्लब जाने अफवाह समेत चर्किएको छ । चेल्सीका निम्ति अन्तिम खेल खेल्दै गरेको भन्दै आज विभिन्न मिडियामा समाचार सम्प्रेषण भैरहेको छ साथै हाजार्डले समेत विभिन्न इसारा गरेको समेत बताइएको...
चमत्कारी हाजार्ड, चेल्सीको सफल खेल – च्याम्पियन लिगको प्रबेश यात्रा सहज पार्दै चेल्सी
जारी इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले वाटफोर्डलाई हराएको छ । आईतबार घरेलु मैदानमा भएको खेलमा क्लब चेल्सीले वाटफोर्डलाई ३–० गोल अन्तरले हराएको छ । उक्त खेल चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफर्ड ब्रिजमा भएको थियो । पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेको...
प्रिमिएर लिग: अन्तिम ४ मा चेल्सीको सम्भावना कम्जोर , टाइटल रेस लिभरपूलका लागि जारी
प्रिमिएर लिग लिभपूलको घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपूलले चेल्सीलाई २-०ले पाखा लगाएको छ । लिभरपूलले सिटीको एक खेल बाकी हुदा ८५ अंक बनाउदै अंक तालिकाको शिर्ष स्थान ओगटेको हो । अन्तिम ४ मा प्रवेश गरेको चेल्सीको आवस्था भने कम्जोर देखिएको...
टाइटल रेसका २ ठुला भिडन्त आज !! के चेल्सीले लिभरपूललाई रोक्ला
प्रिमिएर लिग प्रिमिएर लिग टाइटल रेसका दुइ घोडा म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपूलको भिडन्त आज हुदै छ । सिटीले आज क्रिस्टल प्यालेसको सामना गर्दै छ भने लिभरपूलले चेल्सीको सामना गर्दै छ । लिभरपूल सिटीको एक खेल अगाबै हाल शिर्ष स्थानमा छ...
युरोपा लिग : आर्सनल, नापोली देखि चेल्सी र अन्य ५ टिमको क्वाटरफाइनल खेल आज !!!
यूरोपा लिग आजबाट यूरोपा लिगको अन्तिम ८ का खेल सुरु हुदै छन्, एकै समयमा आज राती ४ खेल हुदै छन । प्रिमिएर लिगका २ टिम आर्सनल र चेल्सीको खेल पनि रहेको छ । आर्सनलले इटालियन क्लब नापोलीसंग भिड्दै छ...
हाजार्ड चम्किदा चेल्सी प्रिमिएर लिगको तेश्रो स्थानमा उक्लियो !!!
इन्ग्लिश प्रिमिएर लिग जारी छ, सिटी र लिभरपूलको टाइटल रेसमा दबदबा छ अन्तिम चारको भिडन्त समेत निकै उचाईमा देखिन्छ । अन्तिम ३ र ४ का निम्ति चेल्सी, टोटनह्याम र आर्सनलको कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । प्रिमिएर लिग अन्तिम चरणको...
सिटी, चेल्सी उक्लिए !! स्पर्समा चम्किदै छन् सन्, चेल्सीका नायक हाजार्ड र सिटीमा साने
जारी प्रिमिएर लिग फुटबल खेल अन्तर्गत ३२ औ चरणको आज भएका ३ खेलमा म्यानचेस्टर सिटी, चेल्सी र स्पर्स बिजयी भएका छन्। आज यी तिनै टिमले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी प्रति सहज जित निकालेका छन् । यस ३२ औ चरणको खेलसंगै लिभरपूललाई...
यूरोपा लिगमा चेल्सीको फराकिलो जित !! जिरुडले गरे ह्याट्रिक
चेल्सी युरोपा लिग फुटबलको क्वटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार राति भएको दोस्रो लेगको खेलमा डाइनामो किभलाई ५–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै चेल्सी युरोपा लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । चेल्सीले समग्रमा ८–० गोलको जित निकालेको हो । यसअघि चेल्सीले पहिलो...
चेल्सीका गोल रक्षक कारवाहीमा, १ हप्ताको पारिश्रमिक काटिने
चेल्सीका गोलकिपर केपा एरीजाबालागालाई कारवाही गरिएको छ। एफए कप फुटबल अन्तर्गत म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको फाइनल खेलमा प्रशिक्षक माउरीजियो सार्रीको निर्देशनलाई नमानेका गोलकिपर केपालाई कारवाही गरिएको हो। सिटीविरुद्ध सार्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै केपाले रिप्लेस हुन मानेका थिएनन्। खेलको अन्तिमतिर केपालाई चोट लागेपछि...
युभेन्ट्सले गर्यो चेल्सी गएका हिगोइन माथि अन्तिम फैसला !!!
सिरी – ए लिग लिडर युभेन्ट्सले प्रिमिएर लिगमा संलग्न खेलाडी जो लोनमा चेल्सी गएका थिए, गोन्जालो हिगोइन उनका निम्ति युभेन्ट्सले अन्तिम निर्णय गरेको छ। युभेन्ट्सले हिगोइनलाइ पुन टुरिन् नबोलाउने निर्णय गरेको छ भने चेल्सीले हिगोईनलाई स्थाही रुपमा क्लबमा अनुबन्ध...
९होसियार रहनुहोस् : झुण्डिरहेको मोबाइल चार्जरको पिन मुखमा राख्दा बालकको मृत्यु !
१०हेर्नुस कायरतापूर्ण पाँचथर हत्या काण्डको ५ तस्बिरहरु
११बालोन डी’ओरका हकदार र नम्बर १ खेलाडी मेस्सी : एमबाप्पे
१२यस्ता राशीहरुलाई आज धन प्राप्ति हुनेछ र लगानी प्रतिफल कस्तोलाई होला ? पुरा हेर्नुस्
१३विवाहलगत्तै गर्न नहुने चार काम
१४बिहे अघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
१५आज मंगलबारको राशिफलले तपाईंलाई के भन्छ ? जान्नुहोस्
१६सानो लिंगलाई कसरी ठूलो बनाउन सकिन्छ !! अपनाउनुहोस् यी ४ सरल र सहज तरिका
१७कोन्टे पछि युभेन्ट्सको सम्भावना बढाउदै चेल्सीका मौरिजियो सारी
१८रियलले सुरु गर्यो ‘अपरेसन पोग्बा’, पोग्बाको सपना जिदानसंग काम गर्ने !!
१९पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
२०गगन थापा बने शिक्षामन्त्री, अर्थ मन्त्रिमा रिजाल